Nlekọta Udo Udo - Otu esi esi eto Spathiphyllum - Specific Planlọ Osisi
Nlekọta Udo Udo - Otu esi esi eto Spathiphyllum
Dị Udo Udo
Udo Lily Udo
Peace Lily, nke a makwaara dị ka White Sail Plant ma ọ bụ Spathiphyllum, bụ otu n'ime osisi ndị ama ama na-eto n'ime ụlọ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ maara naanị ya na-ekpochapụ tox ise dị ize ndụ site n'ikuku, ọ ga-abụ ihe kachasị ewu ewu na ha niile!
Nsị ahụ gụnyere benzene, formaldehyde, trichlorethylene, xylene, na amonia.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, ị ga-amụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ilekọta ụlọ ndị a mara mma.
Aha (s) Udo nke Udo, nchapu, ọkọlọtọ na-acha ọcha, osisi na-acha ọcha
Aha sayensị Spathiphyllum
Mbido Amerịka na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia
Ogologo Ihe ruru isii
Mmiri Ọkara, agafela mmiri
Okpomọkụ 65-75 Celsius F
Iru mmiri Ọkara, alụlụ mgbe ụfọdụ
Fatịlaịza Jiri fatịlaịza na-esighi ike kwa izu ole na ole
Mgbasa Mgbe repotting, kewaa osisi
Pests Obere, nke ududo nwere ike
Ulo lili nke udo bu otu n’ime ahihia ulo kacha mma i nwere ike itolite, o buru naani maka ahihia ahihia nke n’achi dika nke oma. Mana echeghị m naanị m na-ekwu na ọtụtụ n’ime anyị na-eto ha maka ọmarịcha okooko osisi na-acha ọcha nke na-etolite n’elu nke dị gịrịgịrị, kwụ ọtọ. Ọdịiche dị n’etiti okooko osisi ndị a na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị bụ ihe na-eme ka okooko lili nke udo maa mma.
Okooko osisi ndị ahụ n'ogologo karịa akwụkwọ ahụ ma yie lili lili. Okooko osisi bidoro icha mmirimmiri ma chigharia na-acha ocha dika ha na eto. Ha na-acha okooko osisi ogologo oge ma nwee ísì ụtọ dị mfe.
Enwere ihe karịrị lili 40 dị lily, nke karịrị akarị ịkọwa n'isiokwu a! Agbanyeghị, enwere ike kewaa ha nha dị iche iche ha na-eto yana ihe ubi a na-ahụkarị n'ogige:
Obere Udo Udo
'Ike Petite' isi mmalite
ntakiri ichie di n'ulo na ata aru
‘Power Petite’ bụ otu n’ime ụdị pere mpe pere mpe ị nwere ike itolite ka ọ na-erute na gburugburu 15 ″ ma ọ bụ karịa.
‘Wallisii’ isi mmalite
Nnukwu nhọrọ ọzọ maka obere lily dị obere, 'Wallisii' nwere ogologo akwụkwọ na-agba agba ma na-agwụcha ihe dịka 15 ″ ogologo.
Ọkara udo nke okirikiri
'Mauna Loa Kasị Elu'
‘Mauna Loa Supreme’ bụ otu okooko lili ndị ọzọ na-erekarị na mba ahụ. Ọ na-eru 3-4 ′ ogologo na epupụta nwere ike iru 9 ″ n'obosara.
'Clevelandii' isi mmalite
'Clevelandii' na-eto ngwa ngwa karịa 'Mauna Loa Supreme', na-abata na 1-3 ′ ogologo. Agbanyeghị ọ nwere epupụta nwere ike iru 1.5 ′ ogologo, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ pụrụ iche.
Nnukwu Ulo Udo
Nnukwu lily dị iche iche dị na udo, 'Sensation' ga-eru 6 'ogologo. Akwụkwọ ahụ ga-eru 20 ″ ogologo ma dịkwa oke sara mbara. Enwekwara obere ụdị dị iche iche a maara dị ka 'Sensation Mini'.
Ọdịiche Udo dị iche iche
‘Domino’ isi mmalite
Naanị ụdị dị iche iche nke gbanwere, 'Domino' dị ezigbo mma. Ọ dị ka mmadụ fụrụ agba ọcha n’elu akwụkwọ niile.
Dabere na ụdị udo lily ị nwetara, ọ ga-eto eto ọ bụla site na 1-6 ′. Ha enweghi oge ezumike dika otutu ulo, ya mere ogha n’eto. Agbanyeghị, ha ga-akwụsị ịmịpụta ifuru n'oge oyi ma chọọ obere mmiri n'oge ahụ.
N'adịghị ka ọtụtụ osisi, lili lili ga-enwe ọganihu na mpaghara ọkụ. Nwere ike idebe ha ụkwụ 5-8 site na windo ma ha ga-eme nke ọma. Ọ bụrụ na ị debe ha n’anyanwụ gaa ogologo oge, epupụta ga-acha edo edo, nwụọ, wee dapụ.
Ọ bụrụ na ị nweghị ọkụ bụla, ọtụtụ gardeners ọma toro ha n'okpuru T5 fluorescent na-eto eto ọkụ . Yabụ ọbụlagodi na oge oyi ịnwere ike ịnụ ụtọ lili ndị mara mma!
Ekwesịrị toro lili udo na ọnọdụ okpomọkụ sitere na 68-80 Celsius. Etinye ha ebe edeputara ederede dika ha n’achoghi ya.
Ha anabataghị oke oyi nke ọma, yabụ ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ gị gbadaa n'okpuru 45 Celsius F, ha nwere ike ịnwụ.
Gbalịa ịchekwa ala gị nke ọma mana ọ bụghị sọks. Mmiri na-ada ada ga-egbu ngwa ngwa. N'ezie, ihe kachasị kpatara ndị mmadụ ji egbu lili udo ha bụ n'ihi na ha karịrị mmiri. Nogbara mmiri karịa otu ugboro n'izu bụ ọtụtụ ihe maka osisi a. Mmiri ọbụna obere n'oge oyi ka osisi ahụ agaghị amị mkpụrụ.
Can nwere ike ịgwa spathiphyllum gị chọrọ mmiri mgbe epupụta ntakịrị ntakịrị. Echerela ogologo oge n'agbanyeghị - nnukwu ahihia ahihia pụtara na osisi akọrọ ogologo iji mebie usoro mgbọrọgwụ. Ala akwukwo nwere ike gbanwee odo ma daa.
Mara: chlorine dị na mmiri pọmpụ nwere ike imebi lili udo gị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, gbanye mmiri ma ọ bụ hapụ mmiri pọmpụ gị maka awa 24 + ka chlorine wee daa.
Otu ọkọlọtọ nke na-eri mmiri nke ọma, nke na-eme nri nke ọma ga-arụ ọrụ nke ọma maka lili lili. Ọ bụrụ n’ịchọta na ọ na-ejide mmiri dị ukwuu, tinye ụrọ perlite ma ọ bụ aja siri ike na ngwakọta.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgwakọta ngwakọta nke gị, gbakwunye akụkụ ala ndị ọzọ, aja siri ike, na perlite. E kwesiri ka ala di nma na ite nke nwere onu uzo iji gbochie ire ere.
Nwere ike ịgbapụ na-enweghị fatịlaịza udo lily gị. Ma ọ bụrụ na ị kpebie inye ya nri, agala n’elu. Jiri fatịlaịza 20-20-20 zuru oke ma tụgharịa ya na 25% nke ọgwụ a tụrụ aro. Ọ bụrụ na ị hụrụ ọkwa nke akwụkwọ na ifuru na-acha aja aja, ọ ga-abụrịrị na ị tụkwasịrị anya.
Fatịlaịza naanị n'oge opupu ihe ubi na ọkọchị - ọ naghị eto eto n'oge mgbụsị akwụkwọ na n'oge oyi iji kwado fatịlaịza.
Udo nke udo choro ka agbanye ya mgbọrọgwụ. Re-ite ka achọrọ naanị maka afọ ọ bụla ọzọ. Mgbe ị na-akpụ ite, dọba n’ite bụ sentimita ole na ole karịa nke mbụ ka mgbọrọgwụ wee dịrị ntakịrị.
Nke a bụ ụfọdụ ihe ịrịba ama osisi gị dị oke mgbọrọgwụ ma chọọ ịlọghachi:
Osisi gị na-amịkọrọ mmiri niile ị wụsara ya n'ime nanị ụbọchị ole na ole
Enwere mgbọrọgwụ jupụtara na-egosi na ala ite ahụ
Osisi ndị ahụ na-eju ite ahụ
Ọ bụrụ n’ịchọrọ, ị nwedịrị ike ịtugharị ite ndị a n’ime bekee onye a mere .
Kwacha adịghị mkpa, mana ị nwere ike ịkpụcha ya na agbanyeghị iji mee ka lily gị mara mma na afọ.
Nihi na azuokokoosisi obula na emeputa otu ifuru, ozigbo ifuru ahu nwuru onwere ike ghara iju anya. Beecha ya na ntọala nke azuokokoosisi ahụ iji wepụ ya ma kpalite uto ọhụrụ.
I nwekwara ike igbachapu akwụkwọ osisi yellowing ma ọ bụ epupụta nke na-ada ada nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ọ ka mma iji gbochie nsogbu ndị a na nke mbụ, mgbe ụfọdụ, epupụta dị anya ma ga-ewepụ ya.
Thezọ kachasị mfe iji gbasaa osisi lily ọhụrụ bụ ịkewa ha. Okpueze ọhụrụ ga-etolite n’akụkụ ihe ọkụkụ nwere ike ịbepụ ma gbanye ya.
Họrọ okpueze nwere ma ọ dịkarịa ala akwụkwọ abụọ dị ugbu a ma jiri mma dị nkọ, disinfected iji kewaa ha na nne na nna.
Mgbe ị na-egbutu okpueze, gbalịa ị nweta ọtụtụ mgbọrọgwụ dịka i nwere ike - nke a ga-eme ka ọ dịrị ha mfe ịkwado onwe ha. Ikpu okpueze na ite 3 in n'otu ala ị na-eji maka nne na nna na mmiri ozugbo.
Zere fatịlaịza ma ọ dịkarịa ala ọnwa 3 ma ọ bụ na ị yikarịrị ka ọ ga-agba lili ọhụrụ dị nro.
Udo nke udo na-ehichapụ ikuku gị nke ọtụtụ nsị, na-eme ka ha bụrụ ihe ọkụkụ mara mma ịgbasa! Jam ha na mpaghara obula ebe obibi gi ma nye ndi enyi na ndi ezinulo gi ihe ndi ozo - ha ga ekele gi!
Udo lili di nfe dika ihe nlebara anya.
N'ozuzu, lili udo bụ ụlọ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nnukwu nsogbu na pests na ọrịa. Agbanyeghị, enwere ndị isi ole na ole ị ga-elezi anya ka mkpụrụ osisi gị maa mma.
Akwụkwọ edo edo na-egosi oke ọkụ, mana agba aja aja na-agba ọkụ ebe ọkụ anyanwụ na-acha epupụta.
Ọ bụrụ na okooko osisi gị na-acha akwụkwọ ndụ, mgbe ahụ ị nyela lili udo gị nnukwu fatịlaịza. Belata ya otú ọzọ oge na okooko atụgharị si na-acha ọcha.
Jide pests site na ihicha epupụta mgbe niile. Ihe abuo inwere ike inweta bu aphids na mealy chinchi.
Aphids na-amata site nnyapade slime ha na-ekpuchi osisi na. Watergba mmiri na osisi gị ka ha dapụ, soro ncha ahụhụ ma ọ bụrụ na ha ka bụ nsogbu.
Maka mealy chinchi, tinye mmanya isopropyl na bọọlụ owu. Ọ bụrụ na nke a adaa, were ncha ahụhụ.
Ọ bụ ezie na enwere ọrịa ole na ole na-emetụta udo lili, ọ ga-abụrịrị na ị ga-abanye n'otu n'ime ụdị mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ abụọ. Otu n’ime ha si n’ala butere ọrịa ọzọ, nke ọzọ abụrụ na mmiri na-ekwo ekwo na-aga.
Iji na-emeso mgbọrọgwụ ire ere, ị ga-achọpụta ụdị mbipute lily gị nwere. Ntuziaka: o yikarịrị ka ọ bụ onye na-eme ihe ọjọọ bụ mgbọrọgwụ mmiri na-agba mmiri site na ịgbara mmiri ọtụtụ mgbe.
Inye mgbọrọgwụ itucha ma regharịa n'ime ite nwere ala ọhụrụ ga-edozi nsogbu abụọ ahụ.
Q. Anụrụ m na m nwere ike itolite lili udo n'ime ụlọ n'okpuru ọkụ aka, ọ bụ eziokwu?
.B. . Ọ bụ ezie na ha na-ahọrọ ìhè nkịtị, enwere ike iji ha n'ime ụlọ ndị na-enweghị windo ma ọlị. Ha na-eme nke ọma n'okpuru ọkụ ọkụ.
Q. Enwere m ike itinye lili udo m na mpaghara ikuku ikuku?
.B. . Ekwesiri ịhapụ lili nke udo ka ọ ghara ịhapụ drafts ọ bụla ma ọ bụ ikuku oyi iji gbochie osisi ahụ. Enwere ike idozi ha ugboro ugboro na mmiri ọkụ ma nyekwuo mmiri mmiri, dobe ite ahụ n'elu gravels na ịgbara mmiri.
Q. Kedu ihe m ga - eji okooko osisi na-anwụ anwụ ma ọ bụ nwụọ?
.B. . Wepu okooko osisi ọ bụla na-anwụ anwụ ma ọ bụ nke nwụrụ anwụ, ha ga-ewepu ume site na ihe ọkụkụ ma mee ka akwụkwọ ọhụrụ ahụ too. Wepu ma ifuru ahụ na okporo osisi ahụ gbadara ala dịka ị nwere ike n’emebighị osisi ahụ.
Q. Ifuru m nile anwuwo n’azu, uzo m adighi-eto okooko osisi ohuru. Ihe a ga-eme?
.B. . Ọ bụrụ na mgbe okooko osisi nwụsịrị, lily gị adịghị ka ọ ga-achọ ifuru ọzọ, tinye ya na ebe gbara ọchịchịrị ruo nwa oge. Oge nke ọchịchịrị ga-aghọgbu osisi ahụ iche na ọ nweela ebe ezumike na ifuru ga-amalite n'oge na-adịghị anya ọzọ!
Ajụjụ: Ndi lili lili na-egbu mmadụ?
.B. . Mmiri nke osisi ahụ nwere kristal oxalate na ingestion nwere ike ime ka ire na akpịrị pụta. Na, nwere ike ibute dermatitis ma ọ bụ mgbakasị anụ ahụ na ụfọdụ ndị. A na-enwetakarị afọ na-ewe iwe ma ọ bụrụ na akụkụ nke osisi ahụ eri nri. Ma, ọ ga-ewe nnukwu ingestion nke osisi iji kpata nnukwu nsogbu.
Ọ bụrụ na ị nweta mgbakasị ahụ site na kọntaktị na sap osisi, jiri mmiri ọkụ na ncha saa mpaghara ahụ emetụtara. Ọ bụrụ na mgbaàmà dị njọ sitere na kọntaktị ma ọ bụ na-eri nri, kpọtụrụ dọkịta gị.
Q. Ndi okpokoro udo di nsi maka anu ulo m?
.B. . Asịrị nwere na lili udo bụ nsi maka nwamba na nkịta. Ọ bụ ezie na asịrị a nwere ụfọdụ eziokwu, lily udo adịghị egbu anụ ụlọ gị. N'ezie, osisi ahụ nwere oxalates nke ga-eme ka afọ ụmụ anụmanụ daa ma kpalie ha ịkwụsị iri osisi ahụ mgbe ọ rụsịrị naanị otu ugbo.
Ulo lili nke ndi Udo meriri nturu ugo m maka otu n'ime osisi ulo kachasi mfe ilekọta ihe ato:
Ha nwere ike ịnagide ọnọdụ ndị obere ọkụ
Ha na-egosi nzaghachi doro anya mgbe ha chọrọ mmiri
Ha na-agbake nke ọma, ọbụlagodi site na infest
kedu ka isi akunye bulbs ntị bulbs
taa eco liner compost pail liners
bụ igwe eletriki igwe ikuku ọ bụla dị mma
esi ewu griin haus nke ịkwanyere